အဆိုပါဆေးဘက်ဆိုင်ရာယာဉ်, အဘယ်အရာကိုသူတို့က Want - Luanchuan - Orich ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ(Tianjin) ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ဒီယိုရောင်ခြည်ကုသမှုပညာ Imaging ကစီးရီး
သင်ဒီမှာပါ : နေအိမ် /သတင်း
အဆိုပါဆေးဘက်ဆိုင်ရာယာဉ်, အဘယ်အရာကိုသူတို့က Want - Luanchuan
အချိန် : 2019-04-03 hits :
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကျော်, ပို. ပို. မိုဘိုင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာယာဉ်များမြို့ကြီးများမှ ORICH ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းကနေပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြ, ကျေးရွာပေါင်း, မိုင်း, နှင့်နယ်နိမိတ် ... အဆိုပါဝယ်ယူဖောက်သည်ကိုပိုမိုကွဲပြားခြားနားဖြစ်လာကြပါပြီ, ထိုသို့သောကျန်းမာရေးနှင့်မိသားစုစီမံကိန်းကော်မရှင်ကအဖြစ်, ဆေးရုံများ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲစင်တာများ, ယေဘုယျအားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဌာန, အနီရောင်လက်ဝါးကပ်တိုင်, နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ..., ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောမစ်ရှင်ရှိသည်သောသူ. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာယာဉ်များလိုအပ်သူကိုသူတို့သာလူများတို့သည်လည်းမိမိတို့တန်ဖိုးကိုသိကြ.
မေလမှာ 2017, Luanchuan ကောင်တီယွမ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ2သန်းပိုပြီး, နှင့်ပူးတွဲအကောင်းဆုံးရဲ့အကောင်းဆုံးထွက်ရွေးချယ်ခြင်း၏နိယာမအားဖြင့် ORICH ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းကနေနှစ်ခုဘက်စုံသုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲယာဉ်များဝယ်ယူရန် Luanchuan ပြည်သူ့ \_ 's ဆေးရုံနှင့် Luanchuan ရိုးရာဆေးပညာဆေးရုံတာဝန်ပေး.
များစွာသောတောင်များ Luanchuan အတွက်လျော့နည်းမြေများစဉ်ရှိပါတယ်. "ဒီကောင်လေးတွေတောင်ပေါ်ကဆင်းလမ်းလျှောက်, မိန်းကလေးများတောငျပျေါမှလက်ထပ်ထိမ်းမြား, နှင့်အဟောင်းတောင်ပေါ်မှာဖမ်းမိနေကြတယ်” Luanchuan အတွက်ဘဝတစ်စစ်မှန်တဲ့ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်. ဒီမှာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိုးသည်းထန်စွာသောတောင်ပေါ်လမ်းများထဲကပိတ်ဆို့ထားသည်. အထူးသဖြင့်သူတို့အချည်းနှီးသောအသိုက်အကွီးအကဲအဘို့, ဒါဟာအရေးပေါ်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အချိန်မီကုသမှုရရှိရန်ခက်ခဲသည်. ထိုကွောငျ့, အဆိုပါကြိုတင်ကာကွယ်ဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုအထူးသဖြင့်အရေးကြီးပါသည်. သာအစောပိုင်း detection နဲ့အစောပိုင်းရောဂါ, အစောပိုင်းကုသမှုနှင့်အစောပိုင်းပြန်လည်နာလန်ထူဖြစ်ပွားနိုင်သည်
တွင် 2017, Luanchuan အစိုးရသက်ကြီးရွယ်အိုများလူများအတွက်အခမဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲကျော်ပေးဖို့တိကျဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးနှင့်ဆေးဝါးအကျိုးအတွက်စီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော် 60 သူနှင့်ဆင်းရဲသောရွာသားများသည်. တောငျပျေါကသူတို့ကိုကျော်လွှားဖို့အတှကျအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်.
ORICH ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Deviceis မိုဘိုင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရေဒီယိုသတ္တိကြွအဖြေရှာတဲ့ကိရိယာများ, နဲ့ဓါတ်ကင်ခြင်းနှင့်မိုဘိုင်း medicaltreatment ၏လယ်ပြင်တွင်အလွန်အမင်းစနစ်တကျ synchronous ထုတ်လုပ်မှုရရှိကြောင်းတရုတ်အတွက်သာကုမ္ပဏီ. ထို့အပြင်, ကပြီးပြည့်စုံမိုဘိုင်းဆေးရုံဖြေရှင်းချက်ကိုပိုင်ဆိုင်. ကျနော်တို့စိတ်ကြိုက်က "အပြည့်အဝသတိပြုမိကြသည်” မိုဘိုင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်၏ဝိညာဉျသဖြစ်ပါသည်. ORICH ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းမှာ, အဘယ်သူမျှမနှစျခုကမိုဘိုင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာယာဉ်များအတိအကျတူညီကြသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပထမဦးဆုံးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခေါ်ဆိုမှုမှ start.
ဤအစီအစဉ်အပေါ် အခြေခံ., 16 ထိုကဲ့သို့သော X-Ray ရုပ်ရှင်အဖြစ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စာမေးပွဲ, အသွေးသည်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်, B က ultrasound, electrocardiogram, စသည်တို့ကို. တစ်ကြိမ်မှာမော်တော်ယာဉ်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်.
ဖြည့်စွက်ကာ, Luanchuan ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်စီမံကိနျး၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီး, ကျနော်တို့ Luanchuan ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်များအတွက်အောက်ပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်စနစ်များကိုပြင်ဆင်:
တင်းကျပ်စွာ-အချိန်နှင့်မိုးသည်းထန်စွာ-တာဝန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်စီမံကိန်း၏အမြင်တွင်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်း၏အကာအကွယ်အစီအမံများခေါ်ဆောင်သွားကြသည်. နှင့်သံမဏိအရိုးစုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်မူဘောင်၏ဘက်ပေါင်းစုံဒီဇိုင်းကိုထိထိရောက်ရောက် ray ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ဓါတ်ရောင်ခြည်ဧရိယာများအတွက်မွေးစားဖြစ်ပါတယ်.
ပြည်ထဲရေးပတ်ဝန်းကျင် optimization စနစ်က
အဆိုပါ Luanchuan ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်စီမံကိန်းကိုစဉ်အတွင်း, သက်ကြီးရွယ်အိုဆေးပညာဆိုင်ရာစာမေးပွဲစစ်ဆေးရေး၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အမြင်အတွက်, ဆေးပညာမော်တော်ယာဉ်များကိုထိရောက်စွာသန့်ရှင်းစေဖို့အတွက်အတွင်းပိုင်းပတ်ဝန်းကျင် optimization စနစ်တပ်ဆင်ထားကြသည်, ပိုးမွှားသတ်, dehumidify, အေးချမ်းသော, သို့မဟုတ်လေထုအပူ, နဲ့ကြီးမားတဲ့လူစုလူဝေးစီးဆင်းမှုအခြေအနေများအောက်တွင်ယာဉ်အတွက်လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေသေချာ.
အသိဉာဏ် Self-သပ္ပါယ်က high-ဗို့ power supply system ကို
ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများရှိ power supply ၏ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများ၏အမြင်တွင်, အဆိုပါမော်တော်ယာဉ်များအနေနဲ့အသိဉာဏ် Self-သပ္ပါယ်က high-ဗို့ power supply system ကိုတပ်ဆင်ထားကြသည်, မသာ 380V စက်မှုဇုန်အာဏာနှင့် 220V အရပ်ဘက်တန်ခိုးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာယာဉ်များပေါ်တွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းထိုကဲ့သို့သောကျော်မြင့်အဖြစ်ဆိုးရွားသောအခြေအနေများအောက်တွင်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်နိုင်သောသေချာ, Over-အနိမ့်များနှင့်မတည်မငြိမ်အခြေအနေများ.
အမျိုးမျိုးသောဆေးဘက်သည်မိုဃ်းတိမ်န်ဆောင်မှုများ, ထိုကဲ့သို့သောမိုဃ်းတိမ်ကိုရောဂါအဖြစ်, မိုဃ်းတိမ်ကိုရုပ်ရှင်, မိုဃ်းတိမ်ကိုသိုလှောင်မှု, မိုဃ်းတိမ်ကိုဘွတ်ကင်, မိုဃ်းတိမ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေး, စသည်တို့ကို. လူနာအကြားအစိမ်းရောင်လင့်များတည်ထောင်ရန်ထောက်ပံ့ပေးနေကြတယ်, ဆေးရုံများ, နှင့်ကျွမ်းကျင်သူများက.
ဇူလိုင်လမှာ 2017, Luanchuan ကျန်းမာရေးစာမေးပွဲများအတွက်အထူးမော်တော်ယာဉ်များကိုတရားဝင်လက်သို့အပ်ခဲ့သည်.
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ် handoverceremonybetween Luanchuan နှင့် ORICH ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်း
Mr. Nie, ကျန်းမာရေး၏ဒါရိုက်�မစ္စတာာနှင့်မိသားစုစီမံကိန်းကော်မရှင်, Mr. လီ, Luanchuan ပြည်သူ့ \_ 's ဆေးရုံ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတ, နှင့်မစ္စတာ. ding, Luanchuan ရိုးရာဆေးရုံ၏သမ္မတရာထူးလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်
Luanchuan ယွမ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ 10.3 ထက်ပိုပြီးအခမဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲပေးသန်း 50,000 သက်ကြီးရွယ်အိုလူဦးကျော်အသက် 60 သူနှင့်ဆင်းရဲသောရွာသားများသည်. အဆိုပါနှစ်ဦးကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာယာဉ်များထက် ပို. များအတွက်အခမဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲဖျော်ဖြေဖို့အသုံးပြုကြသည် 40,000 သက်ကြီးရွယ်အိုများကလူ, အရာ circles.Xinhua သတင်းအေဂျင်စီသီးသန့်သူ့ရဲ့ဆင်ဟွာ Daily Telegraph သတင်းစာရဲ့၏ရှေ့စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကဖော်ပြခဲ့သည်အားလုံးထံမှကောင်းသော Appraiser အားလက်ခံတွေ့ဆုံ.
Huangbai ကျေးရွာအတွက် ORICH ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်, Miaozi မြို့, Luanchuan ကောင်တီ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်ပေါ်က X-Ray စာမေးပွဲ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်ပေါ် ultrasound စာမေးပွဲ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်ပေါ် ECG စာမေးပွဲ
မေလ၏နိဂုံးမှာအမျိုးသားဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ကျန်းမာရေး Institution များ၏နံပါတ်ရည်ညွှန်းကိုးကား 2017 အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့်မိသားစုစီမံကိန်းကော်မရှင်က၏စာရင်းအင်းအချက်အလက်စင်တာကထုတ်ပေး, မေလအကုန်တွင် 2017, တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏နံပါတ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း 988,000. However, အခြို့သောဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများရှိ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုနေဆဲအဆင်မပြေဖြစ်ကြ. သို့သျောလညျး��ုပါပြည်နယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်တွေအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီး. အများအပြားဒေသများရှိ, အဆိုပါခရိုင်အဆင့်ဆေးရုံများအမျိုးမျိုးသော High-end ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ထားပြီ, ထိုကဲ့သို့သောမှန် CT အဖြစ်, NMR နှင့် MBI. However, ထိုကဲ့သို့သောအသွားအလာအဖြစ်အများအပြားရှုပ်ထွေးအချက်တွေကြောင့်, မူလတန်းအဆင့်မှာလူအတော်များများဟာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို access ကိုအဘယ်သူမျှမရှိ. အားလုံးအဆင့်ဆင့်မှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများဆေးဘက်ဟာ့ဒ်ဝဲအရင်းအမြစ်များ၏ mobility ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကောင်းတစ်လမ်းလိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်မိုဘိုင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာယာဉ်များသူတို့လိုချင်တဲ့ဘာတွေလုပ်နေလဲ.
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုအဓိကတန်ဖိုးကမှန် CT ကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး 128 အတန်းသို့မဟုတ် NMR 3T ဖြစ်ပါသည်, သင်ကလိုအပ်သည့်အခါပေမယ့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သင့်ရဲ့ဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်.
ORICH ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းကြောင့်လိုအပ်ရာတိုင်းထောင့်မှ ORICH ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်မောင်းအခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဆန္ဒရှိ.
နောက်တစ်ခုခုနစ်နှစ်ဘယ်လို Long က Is?
Add: 16 Cuiming လမ်း, Yat-sen သိပ္ပံစက်မှုပန်းခြံ, TEDA, Tianjin, တရုတ်နိုင်ငံ, 301726
ဝန်ဆောင်မှုဌာန:0086-18920872561 Web ကို:https://www.orichmed.com
E-mail ကို:[email protected] Whatsapp:0086-18920872561
Orich ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ(Tianjin) Co. , Ltd © 2019 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး